MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxwayne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shaaciyay in Ra’iisul Wasaare Itoobiya Abiy Axmed ay isla soo qaadeen faragelinta ay Itoobiya ku hayso arrrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya.
Farmaajo cod dheer ku qeexay inay isla meel-dhigeen sidii labadda dal ay u wada shaqayn laayeen labo wadan oo deris ah, kuwaasi oo kala madax banaan, islamarkaana aysan jirin xad-gudub.
“Waxaa xaqiiqo ah in 30-kii sano ee lasoo dhaafay ay dalalka deriska gaar ahaan Itoobiya ay faragelin qaawan oo mid toos ah iyo mid aan toos ahayn ku haysay arrimaha gudaha ee Soomaaliya,” ayuu yiri Farmaajo.
Socdaalkiisii ugu horeeyay ee uu Addis Ababa ku tegay markii la doortay ayuu Farmaajo daboolka ka qaaday in Hailemariam Desalegn Boshe, Ra’iisul Wasaarihii hore ee Itoobiya uu ka socday in dalkiisa aanu faragelin Soomaaliya.
“Markii aan tegay meeshaasi [Ethiopia]….waxyaabihii ugu horeeyay ee aan kala hadlay Ra’iisul Wasaaraha [Hailemariam Desalegn Boshe] waxaa kamid ahayd in Itoobiya ay faragelinta ka joojiso Soomaaliya oo aan u wada macaamilno labo dowladood,” ayuu xusay.
Isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu Madaxwayne Farmaajo sheegay in shirkii saddex geesoodka ahaa ee hogaamiyaasha Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea ugu soo gabagaboobay magaalada Baxar Daar uu wado dhaqaale u furayo ganacsatada Soomaliyeed.
Shirka xiga oo ay yeelanayaa dalalkaan ayuu xusay Madaxwaynaha inuu ka qabsoomi doono magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, kaasi oo uu rajo wanaagsan ka muujiyay in dalalka kasoo qeybgala ay kusoo biirto Jabuuti oo Iskaashiga Dhaqaale ee wadamadaan aan ku jirin.
“Aniga mar kasta waxaan eegaynaa waxa danta u ah dalkeeda iyo Ganac-satadeena…Kulanka xiga waxaan rajaynayaa inuu Muqdisho ka dhoco….Jabuuti iyo dalal kale ayaan isku deyi doonaa inaan ku casuumno,” ayuu hadalkiisa kusoo xiray Madaxwayne Farmaajo.
Hadalkan Farmaajo ayaa kusoo aadaya xilli Jabuuti uu Gollaha Amaanka isha ku hayo, kadib markii uusan kamid noqon hanaanka iskaashiga dalalka gobolka, sababtoo ah in wali colaaddii kala dhaxeysay Eritea ee dhanka xadka aan xal laga gaarin.